မြို့ထဲက ဓါးလွယ်ထားတဲ့ လူငယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မြို့ထဲက ဓါးလွယ်ထားတဲ့ လူငယ်
မြို့ထဲက ဓါးလွယ်ထားတဲ့ လူငယ်
Posted by etone on Jul 18, 2011 in Short Story | 37 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော်က ပလာဇာကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်… ဈေးပတ်ပြီး မောတာရယ် …ခြေထောက်ညောင်းနေတာရယ်နဲ့ … ဂျေဒိုးနပ်ထဲဝင်ပြီး ကော်ဖီသောက် ၊ မုန့်စားနေတုန်း … ကျွန်မမျက်စိထဲဝင်လာတာ မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့် အံ့သြသွားခဲ့ပါတယ်…။
ဆယ့်ကိုးနှစ် … နှစ်ဆယ်နှစ်ကောင်လေးတယောက်…. အသားကတော့ ….. မည်းတဲ့ အမျိုးစားပါ… အကျီ င်္ဘောင်းဘီ အပွ ၊ အဖြူရောင်ကြီး ၀တ်ထားပါတယ်….. ။ ကတုံးဆံပင်ပေါက် ခေါင်းမှာ ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်ကြီးနဲ့ပေါ့ … မျက်မှန် မည်းမည်းကြီးကလည်း တပ်ထားပါသေးတယ်… ။ ဒီလို အပြင်ဆင်က ယခုခေတ်မှာ အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပေမဲ့ …. သူ့နောက်မှာ လွယ်ထားတဲ့ ဓါးရှည်ကြီးကတော့ အထူးဆန်းပါပဲ … ။
တရုတ်ကားထဲက သိုင်းသမားတွေ ဓါးလွယ်ထားသလိုပါပဲ …. ကျွန်မမျက်စိရှေ့တည့်တည့်မို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမဲ့ … ပြသနာ တတ်မှာစိုးတာမို့ လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်… ။ ကျွန်မစိတ်ထဲတော့ ဒီကောင်လေး ဓါးကြီးထမ်းသွားတာ ဘယ်သူမှ မဖမ်းဘူးလားပေါ့.. ဒါလက်နက်ကိုင်ဆောင်မှူ မမြောက်ဖူးလား … ။ တွေးရင်းတွေးရင်း နားမလည်ပဲ အူလည်လည်နဲ့ …. ။
မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ … ရုပ်ရှင် မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတာနဲ့ … ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်… ချွေးနံ့ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကြားမှာ အလွန် စိတ်ပျက်နေတုန်း … ဓါးကြီးနဲ့ တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်… ဓါးလွယ်လျှက် အနေထားနဲ့ လူအုပ်ထဲဝင်လာတော့ … ကျွန်မလည်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ …. နောက်တောင် ယိုင်သွားတယ်… ။ ကျွန်မ မယိုင်ခင်( မမြင်ခင်) ကတည်းက သူ့လူအုပ်ထဲဝင်တာနဲ့ … လူတွေ လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်… ။ ကျွန်မယိုင်သွားတာ မြင်တဲ့လူတွေလည်း ထို့အတူ ဘာမှန်းမသိ လိုက်ယိုင်သွားတယ်… ။ တစ်ချို့တွေကလည်း ပြုံးစိစိနဲ့ ကျွန်မအဖြစ်ကို ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ကြတယ်… ။ ကျွန်မနောက်ယိုင်သွားတာ ရယ်စရာများကောင်းလို့လား …. ဓါးကြီးသာ ဆွဲထုတ်ပြီး တွယ်လိုက်လျှင် အဲ့ဒီနေရာမှာ နှစ်ပိုင်းပြတ်လောက်တယ်လေ… ။ ဒီတော့ လန့်သွားတာ မဆန်းပါဘူးလို့ပဲ တွေးမိပါတယ်
ပလာဇာမှာ ဓါတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရလို့… ဒီတခါ လူအုပ်ထဲမှာ အမိရလှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ် … ။
အိမ်ရောက်လို့ …. အစ်မတွေကို ပြောပြတော့မှ …. အဲ့ဒါ ထီး ပါတဲ့လေ… ဓါးပုံဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါတဲ့ …
စတိုင်၇ှိမှ စတားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ ထင်တယ်
အတု အတုဆိုပြီး အစစ်တွေပါလာ၇င်တော. ၇င်လေး၇ပြီဗျားးးးးးးးး
တကယ်ဓါးသာဆိုရင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းလို့ရတာပေ့ါ
၆လက်မနှင့်အထက် လက်နက်ဆိုရင် ပုဒ်မမြောက်တယ်
၁၉(င) ဆယ့်ကိုး င ပဲ
ဟုတ်ပ etone ၇ယ် အဲ့ထီးက အရမ်းခေတ်စားနေတာလေ
ဟိုတစ်ယောက်တောင် လိုချင်တယ်ဆိုလို့ မရမက လိုက်ဝယ်ပေးထားရသေးတယ်
သူ့မှာ ဘယ်သွားသွား ဓါးကြီးထမ်းလို့လေ
ဆင်တူထမ်းကြပါလား နွယ်ပင်ရဲ့ … ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး .. လူရှိန်တယ်… ။
တရုတ်ကားထဲကလို ..သွေးသောက်မောင်နှမတွေ ဘာတွေ လုပ်လိုက်… ။ အဟီး
အမလေး မလုပ်ပါနဲ့ etone ၇ယ်
တစ်ယောက်ထဲနဲ့တောင် သူဓါးကြီးက ကားပေါ်တက်ရင်
ဟိုလူထိုးဒီလူထိုးနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဆင်တူတာ ထမ်းကြရင်
လူမရှိန်ပဲနဲ့ လူရိုက်ချင်စရာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်လေ
ကားပေါ်တက်တုန်းက မာန်သိပ်မပါလို့ ဖြစ်မယ်… ။
တကယ်တမ်း မာန်ပါပါနဲ့ ( ပလာဇာမှာ တွေ့တဲ့ကောင်လေးလို ) ပဲများပြီး ကားပေါ်တတ်လို့က … သေချာတယ် လန့်ပြေးကြမှာ ။ ဟားဟား
ကိုယ်တိုင်တောင် မြင်လိုက်တုန်းက လန့် သွားတယ် ဘယ်ဂိုဏ်းကလဲပေါ့ … : P
အဲ ဒါ ထီးဓါး တလက် နဲ့ လမ်းသလား ထွက်တာ ပေါ့။
သရုပ် မှန် ကို ပကဓိ မြင်ကွင်း မှာ မသုံးသပ်နိုင် ဘဲ အိမ်ရောက်မှ သူများအကူ အညီ နဲ့ ချပြ နိုင်တာ လဲ လေးစားလောက် တဲ့ နည်းပညာပေါ့။
အီးတုံး ကြောက်တာလဲ ရှိသေးတယ်ပေါ့
နောက်ဆိုဒါထက်ဆန်းပြားတာတွေမြင်ရအုံးမယ် မမ မကြောက်နဲနော်
ဓါး တင်မဟုတ်ဘူး သေနတ်ပုံနဲ့ ထီး ပါရှိသေးသဗျ။
ကျွန်တော့်များ ပြောနေသလားလို့တောင် ခံစားမိပါသေးတယ်။ အစ ဘယ်သူမှ လိုက်မဆောင်းလို့ ဒီဇိုင်းလေး သဘောကျမိလို့ ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားတုန်းကတော့ ၀ယ်လွယ်မိပါတယ်။ အခုတော့ လူသုံးများလာလို့ နည်းနည်းတော့ ၇ှက်လာတယ်။ ဟိုတစ်ခါတွေ့တုန်းကလည်းပါလာပါတယ်နော်… သတိမထားမိလို့နေပါလိမ့်မယ်..။
ဟိုတခါတုန်းက ပါလာတယ်လား … သတိမှ မထားမိလိုက်တာ … အဲ့လိုမှန်းသိလျှင် သူများကိုချောင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ မကြိုးစားပဲ ကိုအာဂကိုနောက်ကျောပေးရပ်ခိုင်းပြီး ရိုက်လိုက်ပါတယ် အဟဲ
ကိုယ်.အလှည်.ကျ မှ ဆေးမမှီ ပဲဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော်တို.အတွက် နစ်နာတယ်ဗျ
အစ်မ၇ဲ. ပို.စ်တွေက ကောင်းလို.
အမလေး အဲဒီ ဓားရိုးနဲ. ထီးက ဈေးကြီးသဗျာ..
ပလာဇာ မှာ ဈေးသွားမေးတာ ၀ယ်ချင်ဝယ် မ၀ယ်ချင်နေ 1သောင်းကျော်ဗျ…
ဒါတော. ကျွန်တော် တော်သားကမှ သိသေးတယ်
ရွှေဘိုမှာ ကျွန်တော် နွားကျောင်းတိုင်း ယူနေကျထီးဗျ
အခုမှ ခဗျတို.ရန်ကုန်ခေတ်စားတာ ဟားဟား
အင်းလေ … ငါ့နှယ့် … ပိန်းလိုက်တာကိုလွန်ရော … ။
ဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးနဲ့ ထီးကို ဒါးပုံစံထုတ်တာလဲ မသိဘူး။ ဒါးဆိုတာ လူမြင်ကွင်းမှာကိုလို့ သင့်တော်တဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ။
ဒါးပုံစံဆို လူသိပ်မရှိန်ဘူး။ လောင်ချာပုံစံ ထုတ်ရင်တော့ လူပိုရှိန်မယ်။
ဒါမျိုး ထီး ရှိမှန်း အခု မှ သိရတယ် ဗျာ ..။ ကျေးဇူးပါပဲ နော်
ရန်ကုန်မှာပေါ်နေတာပေါ့ .. အဲဒီ့ဓါးပုံ ထီးက .. ဓါတ်ပုံစကြည့်မိတော့ တော်တော်ထူးဆန်းသွားတာ
အောက်က စာလေးတွေ ဖတ်မိတော့မှပဲ ထီးမှန်းသိတော့တယ် ဟီးးးးး
ထွင်လည်း ထွင်တတ်ပါပေ့ နော် စီးပွားရေးသမားတွေများ …
ယူအက်စ်မှာ ကစားစရာသေနတ်ကို တကဲ့အစစ်နဲ့တူအောင်လုပ်ထားရင် ဖမ်းလို့ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ထိုနည်း၎င်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အီးတုံးပြောသလို ဒါးနဲ့တကယ်တူတယ်ဆိုရင် ပိတ်ပင်သင့်တယ်။ ထီးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ တကဲ့ကင်ဒိုဒါးရှည်လွယ်ပြီး လူတွေလိုက်ခုတ်ရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ။ ကားစတစ်ကာမှန်တပ်တာကြတော့ လိုက်ဖမ်းပြီးတော့ ဒါမျိုးကြတော့ မသိဘူးဆိုရင် တခုခုတော့လွဲနေပြီ…
အခုမှ မြင်ဖူးတယ် …
အပြင်မှာတွေ့ရင် အံ့သြမိမှာသေချာတယ် …
ရွှေဘိုသားလည်း ဒီဓား လွယ်ပြီး
ဦးအောင်ဇေယျ မျိုးကွဆိုပြီး အာဇာနည်နေ. လူကြီးတွေရှေ. သွားပြမှလားမသိဘူး
ထူးဆန်းလို့ နှစ်သက်တာ မှန်ပေမယ့် သင့်၏မသင့်၏ တော်၏မတော်၏ စဉ်းစားပြီးမှ ကိုင်စွဲသင့်တယ် ထင်တာပဲ။ ဒီလိုသာ လူတိုင်းဓားကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မတွေးဝံ့စရာ ?????????????????
နောက်ရှိသေးတယ်လေ “tattoo ” ပုံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နေလောင်ကာတဲ့ လက်အိတ်အရှည်တွေ၊ မန်းလေးသား ပီတချင်ရင် အပြင်ထွက်တိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ အသုံးအဆောင်လေးပေါ့။
မဟုတ်သေးပါဘူး ဗျာ ။ ကျွန်တော် ဟာ မန်းတလေး သား ဖြစ်သလို ကျွန်တော် သိတဲ့ မန်းတလေးသား တော်တော်များများ ဘယ်သူ မှ လက်အိတ်အရှည် မဝတ်ကြပါဘူး ဗျာ ။ နေပူထဲ သွားမယ် ဆိုရင် အပြင်ထွက်မယ် ဆိုရင် အင်းကျီ လက်ရှည် ဝတ်တာလောက် ရှိတာပါ ဗျ ။ မိန်းမတွေ ဝတ်ကြတာ များပါတယ် ။ မန်းတလေး မှာ မှ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲဒီ လက်အိတ်အစွပ် ဝတ်လို့ ရနေတဲ့ နေရာတိုင်း က အမျိုးသမီး များ ဝတ် ကြမယ် လို့ ထင်မိပါတယ်
ဓါး အစစ်က အမြဲ ကားထဲမှာပါတယ်။ ခုံအောက်မှာ.. အတို တော့ မဟုတ်ဘူး အရှည်.. လိုအပ်ရင် သုံးရအောင် ဆောင်ထားတာ။
ဟို .. အာဖရိကန်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင် ခပ်တောင့်တောင့် ဘဲတစ်ပွေလည်း ကားတစ်စီးနဲ့ဘဲ
( ဒါနဲ့ အိုက်သည်ထီးက ဘယ်လိုင်းကနေဝင်တာလည်း သိဘူးနော )
ခုံအောက်က ဓါးရှည် လက်ကိုင်မှာ လက်နက်ပုန်းပါတယ် ကောက်ပြစ်လိုက်ရင် ယားဒယိုးက ပုပုကွကွ သွားမှန် သွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ။ ပစ်မလွဲဘူး။
ဓါးရိုးနေရာပဲ တူတာပါဗျာ… သေချာကြည့်ရင် ဓါးအိမ်နေရာက ထီးပုံစံအတိုင်းပါပဲ… ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစီမှာလဲ တစ်လက် ရှိတယ်… ဂျပန်ကင်ဒိုဓါးပုံစံလုပ်ထားတာ… ဓါးအိမ်နေရာကတော့ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရုံနဲ့တင် သိသာပါတယ်…
ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေတော်တော်များများက..သာမန် သေနတ်ကို လူကြားထဲ.. အစိုးရဆီခွင့်တောင်းစရာမလိုပဲ… ယူသွားလို့ရတယ်..။
ဒါပေမဲ့ အဲလိုပါ့ဗလစ်မှာဆောင်ထားတဲ့သူ အင်မတန်နည်းပါတယ်..။
ချုံပြောရရင်… ကိုယ့်ကိုယ်လူတွေလန့်သွား..သတိထားမိသွားမှာကို… အရသာခံပြီး.. သူများစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ အပြုအမူပဲ..။
ကျနော်သိတာတော့ ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ သေနတ်ကိုင်လို့ရတာ ရီပတ်ပလစ်ကန်တွေကြီးစိုးတဲ့  red state တွေပါ။ သူတို့ဆီမှာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဝါသနာအနေနဲ့ အမဲလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့လည်း တောပိုင်းပြည်နယ်တွေ၊ မြို့တွေက ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး ခြံကျယ်ကြီးတွေနဲ့နေကြတယ်။ ဒီတော့ အိမ်လုံခြုံရေးအတွက် သေနတ်ရှိမှဖြစ်တယ်။ မြို့တွေမှာလို ရဲက အချိန်ပြည့် ပတ္တရောင် မလှည့်နိုင်ဘူးလေ။ သူတို့ကိုင်ခွင့်ရတဲ့သေနတ်ဆိုတာလဲ အမဲလိုက်သေနတ်နဲ့ ပြောင်းတိုသေနတ်တွေ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်လိုမျိုး ပေးမကိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားရိုင်ဖယ်အသင်းဆိုတာ မင်န်ဘာသန်းချီရှိလို့ ယူအက်စ်မှာ အတော်ဩဇာညောင်းတဲ့ အသင်းဖြစ်တယ်။အစိုးရက ရာဇဝတ်မှုထူပြောလို့ လမ်းပေါ်က သေနတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင် အဲဒီအသင်းကြီးက သေနတ်ထုတ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ပြန်ဆော်တာပဲ။ ဒီမိုကရက်တွေလွှမ်းတဲ့ မြို့ပြလူနေထူထပ်တဲ့ ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတော့ မရဘူး။ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ မြို့တော်အစိုးရက ရီပတ်ပလစ်ကန်ဖြစ်တောင် သူတို့ပါတီမူဝါဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို တင်းကြပ်ပေးရတယ်။ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် Bloomberg က မူလတုန်းက ရီပတ်ပလစ်ကန်ပါတီကနေ တက်လာတာ၊ ဒါပေမဲ့ နယူးယောက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သေနတ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် မြို့ပျက်သွားနိုင်လို့၊ ပြီးတော့ မဲဆန္ဒရှင်အများစုက ဒီမိုကရက်ပါတီယိမ်းကြလို့ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ပေးရတယ်။
နယူးယောက် သေနတ်ကိုင်ချင်ရင် လိုင်စင်နဲ့ အိမ်မှာသိမ်းထားရတယ်။ ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားချင်ရင် ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်ရှိရမယ်။ ဥပမာ- ကျောက်ကုန်သည်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၊ လူမုန်းများတဲ့ အဓမ္မဝါဒီသဂျီး
အသိထဲမှာ ရဲရှိတယ်။ သူတို့လည်း ပစ္စတိုသေနတ် ဝယ်ထားသတဲ့။ ဘာလို့လဲမေးကြည့်တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပေးထားတဲ့ သေနတ်ဆိုရင် အရမ်းကာရော သုံးလို့မရဘူး။ ကျည်ဆံအရေအတွက်ကအစ မှတ်တမ်းရှိတယ်။ အမှားအယွင်းတခုခုရှိရင် မချောင်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်သေနတ်ဆိုတော့ လွတ်လပ်တယ်၊ ကျည်ဆံကိုလည်း ကြိုက်သလောက် အပြင်မှာဝယ်လို့ရတယ်တဲ့